50-JIR AAN WELIGIIS GUURSAN OO KA SHEEKEYNAYA SABABTA UU U GUURSAN WAAYAY IYO HEESO UU KA SAMEEYAY SABABTAAS | BOGGA ARIMAHA JACEYLKA KA DHIGO HOYGAAGA KOOWAAD
�Xilli da�deydu ahayd 19-sano jir ayaa gabar aanu Iskuul isla dhiganaynay jacayl wadaag noqonay, gabadhaas oo run ahaantii ilaa iyo hadda aan ka aaminsanahay in gabar ku dabeecad ah aysan Soomaaliya joogin, xitaa kuma dambaabayo sida ay ila tahay haddii aan iraahdo dunidaba lagama helayo gabar ku ayni ah.
Gabadhaas waxaa ina dhex maray jacayl dhab ah, oo daacadnimo ku salaysan, weligey erey xumaan ah igagama imaan afkeeda, anna sidoo kale erey xumaan ah kumaan oran oo maba aysan iga istaahilin. Gabadhaas la�aanteed ma ahaan karin, saacad iska daaye ilbiriqsi inaan moogaadana ma kari karin oo mar walba oo iyada la arko anna waa la I arkayay, haddii aniga la I arkana iyada ayaa la arkayay.
Muddo 13 sano ayaanu gabadhaas xiriir lahayn, ha dhicin, ha jebin, maxaa kuu roon, maxaa kuu qaraar ayay ahayd halkudhigyadee-na aanu caanka ku ahayn, qofna qofka kale kama sir qarsan jirin, go�aankeenuna wuxuu ahaa guur, inuusan midkeen midka kale ballanta uga bixin, jacaylkana ku cidleyn.
Riyo inaan ku jiro ayaan isu maleeyay, indhaha ayaan maraanmartay, waxaana ogaaday xaqiiqda ah inaan Isbitaal dhex jiifo�. Dadkii ila joogay ayaan weydiiyey goorta meeshan la ii keenay.
�Dadkii ila joogay ayaan weydiiyey goorta Isbitaalka la i keenay, waxay iiga sheekeeyeen xaaladdii aan ku sugnaa daqiiqado kahor iyo sababta aan u miyir doorsoomay oo ay I xusuusiyeen inay ahayd gabadha la iga guursaday darteed, inyasna ii sheegin ayaaba ii rooneyde mar kale ayaan haddana miyir gadoomay oo aan noqday maahsane aan waxba kala ogeyn.
Abtigeygii aan xoolaha aan ku aqal geli lahaa aan ka soo qaatay ayaa Miyiga ka yimid kadib markii akhbaarteyda iyo xaaladda aan ku suganahay loo sheegay, markii warbixinta xaaladdeyda min bilod iyo dhammaad loo sheegay ayuu ogaaday in gabadhii aan uga soo xoolo qaatay guursigeeda la iga guursaday sababtaasna aan u miyir gaddoomay ayaa aniga ma hadli karin oo nin Juuqdii gabay baan noqday uu u tegay gabadha aabaheed oo uu arrintaa kala soo hadlay, laakiin waxaa loo sheegay in Basro Cumar oo nin ooridii ah aan si kastaba la heli karin, balse si xaaladda wiilka (Waa anigee) loo dejiyo la I siiyo gabar la dhalatay Basro oo da�dii ka yareyd ah.
Abtigey go�aankii iyo qorshihii ay soo qaateen isaga iyo Basro aabaheed ayuu aniga iila yimid, laakiin �Nin meeli u caddahay meeli ka madow baa la yiriye� cid aan Basro ahayn inaanan ku qanceynin ayaan u sheegay�.. qayaanada ay Basro igu samaysayna aan aakhiro faraqa heysto, maadaama 13-sano oo aanu saaxiibo ahayn ay qayaano iyo inay iga dal doorsato iigu abaal gudday, nabsiguna ma baaqdee aan markeeda sugayo in nabsigu soo gondo xiro.
�Markii aan abtigey u sheegay in aanan ku qancaynin gabar aan Basro ahayn oo aysanba jirin waa sida aan aaminsahay ilaa iyo haddee gabar u dhiganta inay duni guudkeeda saaran tahay ayuu Abtigey iga tagay, xitaa waxaan ka diiday in gabar uu isaga dhalay uu I siinayo, kadibna wuxuu ku laabtay degaankii uu ka yimid, anna xaalkeygu wixii markaas ka dambeeyay inuu ka sii darro mooyee ma soo hagaagaynin, waxaana galay nolol liidata oo daciifnimadu ay hoggaamineyso, walaahowguna wehel u yahay.
�Caku iyo Dumar mar hadday ku legdadaan kaama dul kacaan� Basro darteed ayaan u walaacay oo nolosheydii xitaa u iloobay, waxaana noqday qof qayirmay oo sida dun miiq ah oo kale jirku u tifmay.
�Barqin duhur, hablaha baararkaa, bidix u rooraaya, Boorso suuf ka buuxay, xarago bagax ka siiyaane, Bankiyada raggaa soo dhigtiyo, Boqolaal rooraaya, Baysteen ninkii lagu arkay, baasha saaraane, Rabbigey hanaga baajiyee, bello yar weeyaane.
Comment by caasho on January 15, 2011 3:21 pm
dumar abaal ma leh
Comment by caasho on January 15, 2011 3:20 pm
bismilaah dumar abaal ma leh
Comment by abdulaziz harthi on December 6, 2010 11:46 am
Comment by ayuubsocdaal on November 10, 2010 8:07 am
walaahi sxb shekadaan waa sheego layaab leh sxb marka wax aan rabna ahadii aan nahay dhalin ta in aan lasocono sheeko walba understand
Sheeko Gaaban GODOBTII MINISOOTA!